Num 23 | Shona | STEP | Zvino Bharamu akati kuna Bharaki, "Ndivakire pano aritari nomwe, undigadzirire pano nzombe nomwe namakondohwe manomwe."
1Zvino Bharamu akati kuna Bharaki, "Ndivakire pano aritari nomwe, undigadzirire pano nzombe nomwe namakondohwe manomwe." 2Bharaki akaita sezvakataura Bharamu; Bharaki naBharamu vakabayira paaritari imwe neimwe nzombe imwe negondohwe rimwe. 3Zvino Bharamu akati kuna Bharaki, "Chimira iwe pachipiriso chako chinopiswa, asi ini ndichaenda; zvimwe Jehovha achauya kuzosangana neni; zvose zvaanondiratidza, ndichakuudza izvo." Akaenda pakakwirira, pakanga pasina chinhu. 4Ipapo Mwari akasangana naBharamu, iye akati kwaari, "Ndagadzira aritari nomwe, ndikabayira nzombe negondohwe paaritari imwe neimwe." 5Jehovha akaisa shoko mumuromo waBharamu, akati, "Dzokera kuna Bharaki, utaure kwaari kudai." 6Akadzokera kwaari, akamuwana amire pachipiriso chake chinopiswa, iye namachinda ose aMoabhu. 7Ipapo akataura nomufananidzo wake, akati, "Bharaki akanditora paArami, Mambo waMoabhu akanditora pamakomo okumabvazuva, Achiti, `Uya unditukire Jakobho, Uya, unditsamwire Isiraeri.'
8Ini ndingatuka seiko asina kutukwa naMwari; Ini ndingatsamwira seiko asina kutsamwirwa naJehovha?
9Nokuti ndinomuona ndiri pamusoro pamatombo, Ndinomutarira ndiri pamusoro pezvikomo;
Havangaverengwi pakati pendudzi. 10Ndianiko angaverenga guruva raJakobho, Kana kuverenga chikamu chechina chaIsiraeri? Kuguma kwangu ngakufanane nokwake!"
11Zvino Bharaki akati kuna Bharamu, "Wandiiteiko? Ndanokutora kuti utuke vavengi vangu; tarira, waramba uchingovaropafadza." 12Akapindura, akati, "Ko handifaniri kuchenjera kuti nditaure zvinoiswa naJehovha mumuromo mangu here?" 13Bharaki akati kwaari, "Douya hako neni kune imwe nzvimbo, paungavaona uripo; ungangoona vokumudzivo voga, haungavaoni vose; nditukirei ivo uri ipapo." 14Zvino akaenda naye kumunda waZofimu, pamusoro pePisiga, akavaka aritari nomwe, akabayira nzombe negondohwe paaritari imwe neimwe. 15Akati kuna Bharaki, "Chimira pano pachipiriso chako chinopiswa, ini ndindosangana naJehovha uko. 16Ipapo Jehovha akasangana naBharamu, akaisa shoko mumuromo make, akati, "Dzokera kuna Bharaki utaure kudai." 17Iye akaenda kwaari, akamuwana amire pachipiriso chake chinopiswa, machinda aMoabhu anaye. Bharaki akati kwaari, "Jehovha wakataureiko?" 18Ipapo akataura nomufananidzo wake, akati, "Simuka, iwe Bharaki, unzwe; Nditeerere, iwe mwanakomana waZipori:
19Mwari haazi munhu,Haangarevi nhema; Kunyange Mwanakomana womunhu Haangashanduki; Chaakataura, haangachiiti kanhi? Chaakataura, haangachisimbisi kanhi?
20Tarira, ndakarairwa kuti ndiropafadze; lye wakatopafadza, ini handigoni kuzvishandura.
21Haana kuona zvakaipa kuna Jakobho; Haana kuona zvakashata kuna Isiraeri; Jehovha Mwari wake anaye, Vanopupurira mambo pakati pavo.
22Mwari akavabudisa Ijipiti, Ane simba rakafanana nerenyati.
23Zvirokwazvo hakuna un’anga kuna Jakobho, Uye hakuna kuuka kuna Isiraeri; Zvino zvicharehwa pamusoro paJakobho napamusoro paIsiraeri, Zvakaitwa naMwari,
24Tarirai, vanhu avo vanosimuka seshumbakadzi, Vanosimuka seshumba. Havangavati pasi vasati vadya chakabatwa, Nokunwa ropa rechakaurawa."
25Zvino Bharaki akati kuna Bharamu, "Usatongovatuka, kana kutongovaropafadza." 26Asi Bharamu akapindura, akati kuna Bharaki, "Handina kukuudza here, ndikati, `Zvose zvinotaurwa naJehovha, ndizvo zvandinofanira kuita?' " 27Bharaki akati kuna Bharamu, "Uya zvino, ndiende newe kune imwe nzvimbo; zvimwe Mwari angafara nazvo kuti unditukire ivo, uri ipapo." 28Zvino Bharaki akaenda naBharamu pamusoro pePeori, panotarira pasi kurenje. 29Bharamu akati kuna Bharaki, "Ndivakire pano aritari nomwe, undigadzirire pano nzombe nomwe namakondohwe manomwe." 30Bharaki akaita sezvakarehwa naBharamu, akabayira nzombe negondohwe paaritari imwe neimwe.